एनटिभीका सबै हास्य सिरियल आखिर किन एक्कासी बन्द भए ? – Khabar Art Nepal
By खबर आर्ट नेपाल	 On १६ श्रावण २०७५, बुधबार १०:५५
काठमाडौँ ।नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक रात ८ बजेको समाचारपछि प्रशारण हुने गरेका मनोरञ्जनात्मक टेलिसिरियलहरु केही हप्तादेखि दर्शकले हेर्न पाएका छैनन् । कार्यक्रम उत्पादक मिडिया हबको नेपाल टेलिभिजनसँग सम्झौता अवधि सकिएकाले ती सबै सिरियल बन्द भएका हुन् । मिडिया हबले हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल (शुक्रबार), जिरे खुर्सानी (बिहिबार) मेरी बास्सै (मंगलबार) र ब्रेक फेल (सोमबार) तथा पारिवारिक टेलिश्रृंखला परिचय (आइतबार) उत्पादन गरेर प्रशारण गर्दै आएको थियो ।
ती सिरियल प्रशारणका लागि नेपाल टेलिभिजनसँग तीन वर्षका लागि गरेको सम्झौता एक्सपायर्ड भएको मिडिया हबका सञ्चालक सोम धितालले बताए । राति आठ पचास बजेदेखि ४० मिनेट ती सिरियल प्रशारण हुने गर्थे । टेलिभिजनका लागि ‘पिक’ मानिने यो समयमा अहिले एनटीभीले ‘फिलर’ हालिरहेको छ । यो समय खरिद गर्नका लागि एनटीभीले हालै नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ । मिडिया हब फेरि पनि उक्त समय खरिद गर्न तयार छ, तर मूल्य घटाउनुपर्ने उसको शर्त छ ।‘पहिलेको मूल्यमा हामीले धान्न सकेनौं, त्यसैले मूल्य घटाएर फेरी टेन्डर निकाल्न आग्रह गरेका छौं,’ धितालले भने । मिडिया हबले १९ वर्षदेखि एनटिभीसँग समय किनेर सिरियल प्रशारण गर्न थालेको हो । विशेषतः नेपालमा हास्यकलाकारहरु जन्माउनमा मिडिया हबको ठूलो भूमिका रहेको मानिन्छ । तर, यसबीचमा आर्थिक समस्याका कारण यी सिरियलहरु पटक(पटक बन्द हुने गरेका थिए । अहिले भने सबै हिसाब करिब(करिब राफसाफ रहेको धिताल बताउँछन् ।
‘भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा हामी निकै संकटमा पर्यौँ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला खाएको घाटा अहिलेसम्म पनि कभर गर्न सकेका छैनौं ।’ मिडिया हबले पछिल्लो समय आइतबार प्रशारण हुने परिचयका लागि ४० मिनेटको १ लाख ७७ हजार ७ सय ७७ रुपियाँ र अन्य कमेडी सिरियलका लागि दुई लाख ७६ हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्दै आएको थियो । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले मूल्य बढ्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । तर, यति रकम अब तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको धिताल बताउँछन् । ‘हामी घाटामा चलेर पनि नेपाली कलाकारिताका लागि अटुट योगदान दिइरहेका छौं । तर, सँधै घरबाट पैसा ल्याएर चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यसैले एनटीभीले सोचिदिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । यदि मूल्य घटाउन एनटीभी तयार भएमा चाँडै सबै सिरियलहरु सुचारु हुने उनको भनाई छ । साथै नयाँ सिरियल थप्ने विषयमा पनि सोचिएको उनले बताए । ‘एनटीभीले पैसा घटायो भने हामी कुनै पनि सिरियल बन्द गर्दैनौं, समय यताउति हुन सक्छ,’ धितालले भने । साथै उनले केही समयअघिदेखि बन्द रहेको ‘तितो सत्य’ पनि पुनः सुरु हुन सक्ने बताए ।
‘दिपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले भनेका छन् फेरि सुरु गर्नुपर्यो भनेर । हामीले निर्णय लिइसकेका छैनौं,’ धितालले भने । लोकप्रिय हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोलका निर्देशक अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ मिडिया हब र एनटिभीको कुरा मिलेको खण्डमा आफूहरु फेरि सिरियल बनाउन तयार रहेको बताउँछन् । ‘भद्रगोल बन्द भएको ४/५ हप्ता भयो । अहिलेसम्म केही खबर आएको छैन । सम्झौता अवधि बाँकी नै छ । त्यसैले उनीहरु दुई पक्षको कुरा मिल्यो भने हामीलाई कुनै समस्या छैन,’ उनले भने । आफूहरुसँगको सम्पूर्ण हिसाबकिताब मिडिया हबले चुक्ता गरिसकेको पनि घिमिरेले जानकारी दिए ।यतिबेला भद्रगोलको टिम फिल्म निर्माणको तयारीमा छ । एक वर्षअघि नै फिल्म ‘फनफनी’ निर्माण गर्ने उनीहरुले घोषणा गरेका थिए ।
पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको हास्य टेलिश्रृंखला ‘ब्रेक फेल’का निर्माता शिवहरी पौडेलले गुनासो गरेका छन् ‘हामी कलाकारले पनि बाँच्नुपर्छ । काम गरेपछि पैसा आउँदैन कति दिन आफूले घरबाट ल्याएर सिरियल बनाउने ? सकेसम्म दर्शकलाइ हामीले निराश बनाउन खोजेका होईनौ तर सधैँ यसरी चल्न नसकिने भएकाले बन्द गर्न बाध्य भयौँ ।’ यदि सम्झौताअनूसार जाने हो भने सबै सिरियल फेरी आउँछ । त्यस्तै पछिल्लो समय जितु नेपालले ‘जिरे खुर्सानी’ पुन सञ्चालनमा ल्याए पनि मिडिया हवसँगको आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिल्दा उनले उक्त सिरियलमा काम गर्न छाडिसकेका थिए भने पछि उक्त सिरियलकोे निर्देशन उनका भतिजा निरज नेपाललले गर्दै आएका थिए ।